Caadi ah: Sawirada Mawduuca. Sidee baad ku ogaanaysaa yaa xaddeynaya mawduucaaga
Haddii aad tahay blogger ama qoraa content, fursadaha ayaad ogtahay waxkasta oo ku saabsan qodobbada mawduuca. Xasuuso in cutubyada mawduuca ay nuqul ka qaadi karaan ama ku xadidi karaan macluumaadkaaga boggaga gaarka ah ee blogs iyaga oo aan heysan wax fasax ah. Qaar ka mid ah waraaqaha wax lagu qoro oo kaliya nuqul ka samee oo ku dhajino qoraaladaada blog-ga mar walba, halka kuwa kale ay isticmaalaan barnaamijyo isdaba-joog ah si ay u qaataan nuxurka RSS-ka iyo daabacaan boggooda. Halkan waxaan ku sharxi doonaa sida loo ogaado cidda ka xadaysa waxyaabaha ku jira boggaaga iyo tallaabooyinka aad ka qaadayso iyaga - debt settlement near me.
Sida loo ogaado in goobtaada la xoqay:
Haddii aanad raadinaynin magacaaga Yahoo, Bing ama Google, ma raadin kartid bogagga internetka ee xaday mawduucaaga si joogto ah. Haddii aad raadineysid inaad ogaatid kuwa spam mersin ama hackers, waxaad isku dayi kartaa siyaabahan soo socda.
Waa habka ugu sahlan oo sahlan ee lagu ogaado cidda wax ka xadaysa internetka. Barnaamijkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad gasho URL-yada nuxurka boggaaga iyo waxaad ka heli kartaa nuqullo ku qoran World Wide Web. Waxaad isticmaali kartaa nooca bilaashka ah oo leh fursado xaddidan ama koobi qiime ah oo kuu oggolaanaya inaad eegto ku dhowaad 10,000 bog oo bog ah oo loogu talagalay dhowr bucks.
Waxaad sidoo kale isku dayi kartaa trackbacks of site WordPress aad u aqoonsadaan iyo crack crack on goobaha in xadaan content aad maalin kasta. Haddii aad isticmaasho Akismet, qaar badan oo ka mid ah trackbacks ayaa lagu muujin doonaa faylkaaga spamka. Fure u aqoonsashada iyo helitaanka raadraaca waa in lagu daro xiriirada boostadaada leh qoraalo adag. Isku xirnaanta gudaha iyo dibaddaba waxay muhiim u tahay naqshadeynta goobtaada.
3. Qalabaha Webmastererka:
Hab kale oo lagu heli karo sawirrada wax lagu qoro waa iyada oo la adeegsanayo Qalabaynta Webmaster. Booqo Webka> Xidhiidhka xisaabta Google Analytics oo riix bogga Linked Pages. Websayt kasta oo kuxiriirta posts waa lagu soo bandhigayaa aaggan. Si aad u hesho xiriiradaada boggaan, waxaad ku qasban tahay inaad gujiso domainka oo aad hesho faahfaahinta waxyaabaha ay ka mid yihiin boggaga internetka laga xaday. Halkan waxaad ku arki doontaa sida aad u quruxda badan ee ay u kobcinayaan iyo u dhigi laheyd mawduucyada post iyo content maalin kasta.
4. Google Faah faahin:
Haddii aadan si joogta ah u soo dirin oo aad raadineyso inaad sii wadato wixii ku saabsan qoraalkaaga ama maqaalladaaga boggaga kale, waa inaad sameysataa ficilada Google adigoo isticmaalaya qalabka saxda ah ee mawduucyadaada iyada oo la gelinayo calaamadaha oraahda.
Abaalmarin Gaariga Maqalka ah:
Haddii aad abuurtay bogga WordPress, waa inaad isku daydaa faylka rukunka RSS ah. Waxay u ogolaataa dadka isticmaala qaybaha qoraalka ah ee qoraalkaaga hoose ama korka content ee raashinka. Haddii aadan haysanin goobta WordPress, waa inaad si fudud u qeexdaa sharaxaadda gaaban ama qoraalka hoose ama qaybta aad ka koobantahay oo ay ka kooban tahay macluumaadka la midka ah waana in loo gudbiyaa si haboon.
Sida loo Joojiyo Maqalka Maqalka?
Haddii aadan rabin qof inuu xadaan ama nuqul ka bixinayo boggaaga, waa inaad qaadataa dhowr tallaabo. Ugu horeyntii, waa inaad la xiriirtaa maamulaha goobta oo weydii isaga / iyada in ay hoos u dhigto bogagga halkaa ku qoran nuqulkaaga. Waxaad ku qancin kartaa isaga / iyada si aad u hesho maqaaladaa isla markiiba laga saaro.
Haddii aysan jirin siyaabo la xidhiidha maamulaha, waa inaad sameysaa Yaa raadineysa si aad u ogaato qofka leh boggaan ama magac domain. Haddii aan si gaar ah loo diiwaangelin, waxaad si fudud u helaysaa cinwaanka emailka maamulka. Beddel ahaan, waxaad la xiriiri kartaa GoDaddy ama HostGator oo waxaad ku soo jeedin kartaa in website-yada ama magaca domain ee su'aashu ay si joogto ah u xadidaan content-kaaga internetka waana in laga saaraa ama la joojiyaa isla markiiba.
Ugu dambeyn laakiin aan ugu yaraan, waxaad booqan kartaa DMCA. Waa inaad isticmaashaa adeegga takedown-ka si aad u hesho sawirradaada telefishinka, fiidiyowyada, qoraalada blogka iyo waxyaabaha laga saaray. Waxaa jira qaar ka mid ah plugabyada WordPress oo ku jira DMCA ilaalinta ilaalinta, waxaadna ku rakibi kartaa boggaaga si aad ugu digtid khadadka iyo gardarrada.